Bronchiolitis n'ime ụmụaka
Bronchiolitis bụ otu n'ime ọrịa ndị na-egbu egbu nke na-emetụtakarị ụmụaka. N'ihi eziokwu ahụ bụ na usoro nchebe ahụ na-eto eto ezubebeghị, nje, na-ebute traktị nke iku ume, na-abanye n'ebe dị anya, na-ebute bronchi na bronchioles. Ọdịdị nke akpụkpọ anụ mucous kpatara ha na-egbochi iku ume nke ụmụ, na-eduga na igbochi.
A na-ewere ụmụaka nke afọ abụọ mbụ nke ndụ dịka ihe ize ndụ ụmụaka nwere ike ịmepụta bronchiolitis. Ọnọdụ kachasị elu na-adabere na afọ 2-6 ọnwa.
Bronchiolitis na-eme na nọneti ọ bụrụ na ọrịa nwere ọrịa intrauterine. Nke a bụ otu n'ime nsogbu kachasị njọ nke ọrịa ahụ, ebe ọ bụ na ihe ndị na-egbu egbu ma ọ bụ mmepe nke ihe mgbagwoju anya nke usoro bronchopulmonary abụghị ihe ọhụrụ.
Mgbaàmà nke bronchiolitis
Ihe dị ka 90% nke ihe gbasara bronchiolitis na ụmụ ọhụrụ na-akpata ọrịa cytial rhinosin. Ọtụtụ mgbe ọrịa ahụ na-amalite n'ụbọchị nke atọ ARVI. Ihe nrịba ama nke mmepe nke bronchiolitis bụ ụkwara akọrọ siri ike, nke na-amalite iji mkpụmkpụ ume na-esonyere ya, na-agbagharị ma na-afụ ụfụ. Nwatakịrị ahụ na-ara ụra, agụụ ya na-arịwanye elu.
Site na mmepe nke nnukwu bronchiolitis, ihe mgbaàmà niile na ụmụaka na-eme ihe ike. Ọrịa ahụ nwere ike iso cyanosis nke ihu, okuku ume iku ume na tachycardia siri ike.
Mgbaàmà nke ikpochapụ bronchiolitis na ụmụaka
A na-akpọ ụdị ọrịa ahụ bronchiolitis obliterans. Ọ na-adịkarị ụkọ, ya mere, ruo otu afọ, ihe ruru ụmụaka 4-5 nwere nchoputa a na-abanye n'ime etiti ahụ. Na nke a nke bronchiolitis bronchioles na obere bronchi na-arịa ọrịa, ọbara ọbara na-agbaghakwa ọbara.
Ihe mgbaàmà kachasị nke ịchọta bronchiolitis bụ ụkwara siri ike na dyspnea na-arịwanye elu, nke na-egosi na ọ na-enwe obere nsị n'ahụ. Ihe a na - ahụ maka onye ọrịa ahụ na - egbuke egbuke, ntutu na ọkụ. Ọrịa a na-ejikọta ya na oge "ịla n'iyi", mgbe enweghi ọganihu ma ọ bụ ka njọ nke mgbaàmà dị ugbu a.
Ọgwụgwọ nke bronchiolitis na ụmụaka
Mgbe dọkịta na-enye ọgwụgwọ bronchiolitis, dabere na usoro ọrịa ahụ. Ebumnuche ndị a bụ iji wepụ ihe mgbaàmà ahụ: ịmepụta sputum, nkwụsị na mbenata na okpomọkụ. Iji mee nke a, a na-enye nwa ahụ na-arịa ọrịa ọgwụ ọṅụṅụ na-enye mmesapụ aka, ndị na-atụ anya ya na ọgwụ ndị na-ebelata okpomọkụ. E nwekwara ike ide ọgwụ nje. Ọ bụrụ na ọrịa ahụ dị njọ, a na-eziga nwatakịrị ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa.
N'izugbe, prognosis maka bronchiolitis abụghị rosy: ọtụtụ ụmụ mgbe ọrịa ahụ nwere nsogbu nke respiration mpụga, ọnyá na-egbochi bronchial na bronchhopulmonary system pathology. E nwekwara ihe ize ndụ nke ịmalite ịrịa ụkwara ume ọkụ, karịsịa ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere ike ịmalite imeghachi ahụ.
Gịnị mere nwa ahụ ji eti mkpu mgbe nri?
Nwatakịrị ahụ nwere uda na popu
Gel nke na-eto eto maka ụmụaka
OGR na ụmụaka
Chickenpox - mgbe ị nwere ike ịsa ahụ nwata?
Chlamydia na ụmụ: mgbaàmà
Ahụhụ ụmụaka 39
Chicken pox na ụmụ
Ọrịa nke Giringsprung na ụmụaka
Agwọ maka allergies maka ụmụaka
Toxoplasmosis na ụmụaka
Ihe ngosi nke bronchitis na ụmụ
Bruises n'okpuru anya nwa
Nri maka nwatakiri afọ 2
Embassy nke France na Belarus
Egwuregwu Maritime Museum nke Estonia
Ọrịa cancer nwere ogo 4 na metastases - mmadụ ole na ole?
Dicentra: ịgha mkpụrụ na nlekọta
Strudel na anụ na German
Na-eche maka akpụkpọ anụ
Ụdị Cyclamen na akwa
Ugwu Santa Lucia
Jaketị - Mmiri 2015
Ụlọ obibi ndị mọnk Copan
Kedu ka esi ewe Ceirizine?
Embassy nke Myanmar na Russia
Ụdị mgbọrọgwụ na ụdị usoro mgbọrọgwụ
Ụdị uwe ime abalị 2016
Kedu vitamin nke dị na mmanụ ihe oriri?
Eonline kpughere ihe mgbaghoju anya banyere omumu nke nwa ebighi-ebi Jon Reese Myers!
Kedu ụdị mkpụrụ nwere ike ịme nne na-elekọta nwa?
Grik na-ejiri aka aka
Ihe odide caloric nke mkpụrụ osisi sunned